Miala amin'ireo hevi-diso diso efatra momba ny sakafo am-bifotsy
Amin'ny maha-sakafo am-bifotsy azy ireo dia maro ny olona mieritreritra preservatives, fangaro mavesatra, ambin-javatra sisa tavela… Ary tsy misy izany rehetra izany. Andao hijery angano efatra momba ny sakafo am-bifotsy. Hevi-diso 1: afaka maharitra mandritra ny iray na roa taona ny kanety. Ahoana no ahafahan'izy ireo tsy misy preservative raha ny marina, ny preservatives dia iray amin'ireo ...Hamaky bebe kokoa »
Fanadihadiana amin'ny tsena sakafo am-bifotsy
Tamin'ny taona 1950 sy 1960 dia nisy ny fitaovana fanodinana toy ny fanjonoana, ny tavoahangy tavoahangy ary ny fandotoana plastika, ary nitombo ihany koa ny karazan-dranomasina anaty rano sy hazandranomasina am-bifotsy. ary amidy tsara ao an-trano ...Hamaky bebe kokoa »
Ny niandohan'ny lohataona
Lohataona malaza any Shina ny horonana lohataona. Fenoy koba manify, soloina lava toradroa, endasina amin'ny menaka mandra-pahatapitry ny lokony. Volom-bolamena sy marefo azo hanina. Indrindra amin'ny lohataona, maro ny olona no manandrana ity tsindrin-tsakafo ity, ary taloha miala voly amin'ny namana sy havana, hitsena ny dikan'ny Taom-baovao ...Hamaky bebe kokoa »